Somali News 07.27.21 | KWIT
Kuleylka kuleylku wuxuu si gaar ah dhib ugu noqon karaa dadka qaba waallida.
Afhayeen u hadlay cutubka Iowa ee Alzheimer’s Association ayaa sheegay in kuleylka xad dhaafka ahi uu noqon karo mid qatar ah sida jiilaalka xilliga qaboobaha dadka qaba arrimaha xusuusta.
Haddii qof kaligiis ku nool yahay, waxaa laga yaabaa inuusan fahmin siyaabo uu isku qaboojiyo ama haddii ay la kulmaan daal kuleyl ama fuuqbax.
In ka badan lix milyan oo Mareykan ah ayaa la nool cudurka Alzheimer, oo ay ku jiraan 66,000 Iowans.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu arkaa kiisaska isbeddelka ee COVID-19 ee Degmada Woodbury. Gobolka Websaydhka coronavirus ee gobolka Iowa wuxuu muujinayaa heerka waxtarka ee 5%, oo leh 41 kiisas cusub toddobaad gudihiis. Agaasimaha Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu leeyahay dacwadaha maxalliga ah tiradoodu waa meel u dhexeyso saddex illaa 13 maalintii. Wuxuu rajaynayaa CDC inay soo saarto tilmaamo cusub oo maaskaro ah. Warbixinnada wararka ayaa sheegaya in CDC ay u badan tahay inay kugula talinayso in dadka si buuxda loo tallaalay ay bilaabaan inay xirtaan waji-dabool gudaha guryaha meelaha heerarkoodu sarreeyo.
Sharci ka soo baxay Iowa dib bishii Meey ayaa ka mamnuucaya magaalooyinka, gobollada, iyo iskuulada in ay u oggolaadaan maaskaro. Si kastaba ha noqotee, ganacsiyada wali waxay u baahan karaan macaamiisha inay xiraan.